'House of Wax' Collector's Editon Blu-Ray Jupụta na Withlọ Osisi Egwu
Mbido Blu ụzarị 'House of Wax' Collector's Editon Blu-Ray Jupụta na lerylọ Osisi Egwu
'House of Wax' Collector's Editon Blu-Ray Jupụta na lerylọ Osisi Egwu
by Trey Hilburn III June 7, 2021 1,487 echiche
Chọpụta ụlọ ọrụ na-eweta ọhụụ na egwu bụ 2005 dị nwute, elegharala slasher anya, Ulo nke wax. Ihe nkiri a siri ike ma dị mma ịhụ ịbịaru maka onye ọzọ na-aga ịchọta ndị na-ege ntị ọhụrụ. Nke a bụ onyinye ọzọ sitere na Entertainment Castle Entertainment ndị wetara anyị Ghostgbọ mmiri na Onlọ na Ugwu Haunt.
Ihe nkiri a pụtara Elisha Cuthbert, Chad Michael Murray, Brian Van Holt, Paris Hilton, Jared Padalecki, Jon Abrahams na Robert Ri'chard ma bụrụkwa egwuregwu kpụ ọkụ n'ọnụ mgbe a tọhapụrụ ya na ụlọ ihe nkiri. Agbanyeghị, n'oge ahụ enwere ntakịrị sllas na ọ nweghị onye dị njikere igosi, opekata mpe ọ bụghị na ndị mmadụ.
Na nchịkọta akụkọ maka Ulo nke wax na-aga dị ka nke a:
Mgbe ụgbọ ala ha mebiri na njem, ndị enyi isii nọ na kọleji na-adọrọ uche gaa n'otu obodo dị egwu backwoods. Ọchịchọ ịmata ihe na-akawanye mma n’ime ha mgbe ha masịrị ya macabre House of Wax. N'oge na-adịghị anya ha chọpụtara na obodo ahụ abụghị ka ọ dị ka ọ dị, na ha ga-achọkwa ụzọ ha ga-esi pụta tupu ndị ohi ọjọọ na-eche echiche egbu ha.
The Ulo nke wax atụmatụ pụrụ iche na-aga dị ka nke a:
· NEW 2K i scanomi nke interpositive
· NEW Die, My Darling - nyochaa nke onye omee Paris Hilton gbara
· NEW Akụkọ banyere Blake na Paige - N'ajụjụ ọnụ nke omee Robert Ri'chard
· NEW Organ grinder - Ajụjụ ọnụ nke onye na-ede egwú John Ottman
· ỌH NEWR To M M, Ha Dị Ndụ ma Na-eku ume - N'ajụjụ ọnụ nke etemeete mmetụta Jason Baird
· B-Roll na Bloopers Video Nkọwa Commentary
· Site na Ọnọdụ: Joel Silver Na-ekpughe oflọ nke Wax
· Wax On: The Design nke House of Wax
· Bulọ E Wuru na Wax: Ihe Nlere Anya nke Waxlọ Wax
· Mmeghe ọzọ: Egburu Jennifer
· Gag ukwu
· Ajụjụ ọnụ Vintage na ndị nkedo na ndị ọrụ site na ngwa ntanetị
· Ihe nkiri egwuregwu
Ulo nke wax nchịkọta nchịkọta abịarute July 13 ma anyị enweghị ike ichere igwu n'ime atụmatụ ndị a dị egwu. Ị nwere ike gafee ebe a ka bulie nke gị.
Ihe ojoo ojoo ojoo, Ekele diri ndi nwuru anwu na-abia n'isi nso! Lelee ụgbọala na-adọkpụ n’ebe a.